မ၀အောင် ကြိုတင်ထိန်းထားလို့ ရပါသလား . . . – Healthy Life Journal
Posted on စကျတငျဘာ 7, 2020
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊—
Q. မ၀သေးတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ရော ၀မလာအောင် ဘယ်လိုသတိထားသင့်ပါသလဲ ဆရာ။
A. မ၀သေးတဲ့သူတွေက ကိုယ့်အလေးချိန်နဲ့ ကိုယ့်ခါးကို အမြဲတိုင်းနေဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်က မတက်အောင် ထိန်းရတာက ပိုလွယ်ပါတယ်။ ၀ပြီးမှ ပြန်လျှော့ရတာ ခက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေမှာ အဆင်သင့်အစာ (Junk Food)တွေ စားတာများလို့ ကလေးတွေက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အ၀လွန်တဲ့ ကလေးတွေ ဖြစ်လာနေပါတယ်။ ဒါကို ဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
၀တာကို ပိန်အောင်လျှော့တာက လှချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်းမာအောင်လျှော့တာ၊ ရောဂါတွေ အန္တရာယ်ကနေ ကင်းဝေးချင်လို့ လျှော့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၀ပင်ဝသော်ငြား Metabolically Healthy ဖြစ်အောင် နေရပါမယ်။ ဆိုလိုတာက ၀နေရင်တောင် ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထပ်တက်မလာအောင် ထိန်းရမယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆီပိုတွေ တက်မလာအောင် ထိန်းရမယ်။ ခါးအတိုင်းအတာက များနေရင် လျှော့ရမယ်။ ဒါဆိုရင် ၀ရင်တောင်မှ အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေမရှိအောင် ကာကွယ်ထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Related Items:body weight, Fat, weight lose